ฺBaanKruChin (Rambutan) : Hlala phakathi kwemithi yeziqhamo
Phlap Phla , Chanthaburi, Thailand
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguBrandy&Friends
UBrandy&Friends unezimvo eziyi-298 zezinye iindawo.
I-BaanKruChin yindlu ekhethekileyo yembali ejikelezwe yimithi yeziqhamo, imangosteen kunye neLonkong phakathi kwezinye. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yobuhlobo babantu, indawo yayo entle kunye nendawo efanelekileyo. Indlu yam ilungele izibini, iintsapho ezinabantwana. Kufuphi nevenkile ezisi-7 kunye nemarike yaseThai apho iziqhamo kunye nemifuno ekhuliswe ekuhlaleni, inyama kunye nokutya kwaselwandle kunokuthengwa ngamaxabiso afikelelekayo. Iindwendwe zinokukonwabela ukukha iziqhamo ezizikhethele zona.(Aprili-Meyi)
I-BaanKruCHIN ibali lomfundisi wangaphambili ongazange anikezele.Wakha ifama yakhe ngezandla zakhe ngaphandle kwesixhobo kwihlathi eliyingozi elitshisayo malunga neminyaka eyi-100 edlulileyo. Ukuba ngutitshala kunye nomlimi ngexesha elinye akukho lula. Unokuchukumisa kwaye ufunde apha ukuba wenze njani.
IMangosteen, iRambutan, iLonggong, iDurian, umthi werabha wePara zikhuliswe apha. Intaba, ingxangxasi, ulwandle, iziqhamo ezitshatyalaliswayo, ilitye elinqabileyo, ukutya kwendawo, kunye nento eyahlukileyo onokuyifumana e-BaanKruCHIN
KUTHENI APHA ?
IZINTO ZOKWENZA :
EZOLIMO : Ndwendwela ifama yeziqhamo eshinyeneyo (imangosteen, i-longan, irambutan, i-durian kunye nezinye ezininzi). Ngenxa ye-Chantaburi ngumhlaba otyebileyo weziqhamo ezithunyelwa kumazwe ashushu kwihlabathi jikelele ngoko ungaphoswa kukubona apha.
UKUQHUBEKA NGEBHAYIKILE UKUYA KUWA AMANZI: Kukho iingxangxasi ezi-2 zamanzi, ukuwa kwamanzi eKlong Narai kunye nokuwa kwamanzi ePlew, Ungonwabela ngaphandle apha. Kufuphi ne-BaanKruCHIN. Iikhilomitha ezisi-7 kuphela. ukusuka endlwini yam.
UKUTHENGA IGEMSTONE KUNYE NOBUCHULU : IChantaburi sisixeko selitye elinqabileyo. Imarike yeGemstone ivulwa ngo-9:00am ukuya ngo-3:00pm kuphela ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo nangeCawa. Kodwa ivenkile yobucwebe yonke imihla ivuliwe. Isafire eluhlaza, isafire emthubi kunye neRuby zithandwa kakhulu. Indlela yaseSri Chan yindlela yobucwebe.
I-LOCAL OPEN AIR MARKET : Zininzi iimarike zomoya ezivulekileyo zasekhaya kufutshane neBaan KruCHIN . Bathengisa izinto ezintsha zasekhaya, ukutya kwaselwandle, iziqhamo, imifuno, ukulungele ukutya, idessert kunye nento evela ehlathini. Andazi ? Kodwa ndicinga ukuba ukhe wayibona ngaphambili.
UKUPHEKA UKUTYA KWE-THAI: I-Padthai, i-Tom yam Kung, i-Pad Krapao ezi kukutya okuthandwayo kwase-Thai, apha unokufunda ukupheka. Let cook n try your performance .(kwiqela ubuncinane abantu abayi-4, hlala ubuncinane ubusuku obu-4)
HLOLA ITEMPELELO YABUDDHIST: Iitempile ezi-3 ezikufutshane ne-BKC, ukusuka apha ungajonga umahluko wendlela yokuphila yabemi balapha ukuba kutheni bekholelwa.
I-BaanKruChin yindlu ekhethekileyo yembali ejikelezwe yimithi yeziqhamo, imangosteen kunye neLonkong phakathi kwezinye. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yobuhlobo babantu, indawo yayo entle kunye nendawo efanelekileyo. Indlu yam ilungele izibini, iintsapho ezinabantwana. Kufuphi nevenkile ezisi-7 kunye nemarike yaseThai apho iziqhamo kunye nemifuno ekhuliswe ekuhlaleni, inyama kunye nokutya kwaselwandle kunokuthengwa…
I-Baan KruCHIN yindlu yembali ekhethekileyo yalala phakathi komthi wefriut. Sinezinto ezininzi zakudala zalapha. Ungakonwabela ukuhlala kwaye uthanda abantu basekhaya. Kulula ukujonga indawo ezininzi ezinomtsalane kwesi sixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Brandy&Friends
Ndiyakuthanda ukujikeleza ihlabathi ukuba ndinethuba. Ndiyakonwabela ukufunda umahluko phakathi kwabantu nenkcubeko . Ndiyakuthanda ukonwaba neendwendwe zam , ndiyakuthanda ukufunda olunye ulwimi . Inkonzo luvuyo lwam lundwendwe lwam. Ke.. yiba lundwendwe lwam....
Ndiyakuthanda ukujikeleza ihlabathi ukuba ndinethuba. Ndiyakonwabela ukufunda umahluko phakathi kwabantu nenkcubeko . Ndiyakuthanda ukonwaba neendwendwe zam , ndiyakuthanda ukufund…